Ifektri yealuminium alloy factory - China iAluminium ingxubevange yeeFestile yeeFestile, abaxhasi
Imowudi yokuvula entsha
Ifestile edadayo yamkela "inkqubo yotshintsho lwee-axis zeselfowuni ezininzi". Imowudi yokuvula eyahlukileyo esecaleni ishenxisa iindlela ezintathu zokuvula zokutsala, ukuvulwa ngokuthe tyaba kunye nokungena ngaphakathi emhlabeni. Yenza ukusetyenziswa kobunzululwazi nokusebenziseka ngokupheleleyo koncedo lwefestile yokutyibilika yokugcina isithuba, iwindow yokuvula esecaleni ivaliwe ngokucinezela, kwaye uhlobo oluguqulweyo lutshintsha umoya. Xa kuvulwa ifestile edadayo, kuya kufuneka ujike ngesiphatho ngobunono ukuvula ...
Izibonelelo yindawo enkulu yokuvula, ukungena komoya okuhle, ukutywina okuhle, ukufakwa kwesandi, ukugcina ubushushu kunye nokunganyamezeleki kakuhle. Ukucocwa kwefestile kulungele ukuvula kwangaphakathi; iwindow evulekileyo ayingeni kwisithuba xa kuvulwa ukuvula. Ukungancedi kukuba ifestile incinci kwaye umbono awuvulwanga. Ukuvulwa kwefestile engaphandle kufuneka kuthathe indawo engaphandle kodonga, ekulula ukuyonakalisa xa kuvuthuza umoya; ngelixa iwindow engaphakathi iza kuhlala kwinxalenye yendawo ngaphakathi, kwaye akululanga ukusebenzisa iwindow yekhusi. Xa uvula ifestile, akukho lula ukusebenzisa iwindow yekhusi kunye nekhethini, ezinje ngomgangatho awuvali, kwaye inokungena nasemvuleni.
Ngokukodwa, kuba ialuminium alloy sisinyithi, siqhuba ubushushu ngokukhawuleza, ke xa kukho umahluko omkhulu phakathi kwamaqondo obushushu angaphakathi nangaphandle, ialuminium alloy ingaba "yibhulorho" yokuhambisa ubushushu. Ukuba ezo zinto zenziwe ngeengcango kunye neefestile, ukusebenza kwe-thermal insulation kuya kuba kubi. Ibhulorho eyaphula i-aluminium alloy kukuqhawula i-aluminium alloy ukusuka embindini. Isebenzisa iplastiki elukhuni ukudibanisa i-alloy aluminium ephukileyo iyonke. Siyazi ukuba ukuhambisa ubushushu beplastiki ngokucacileyo kucotha kunesinyithi, ngoko ke ubushushu akukho lula ukugqithisa kuwo wonke umbandela, kwaye ukusebenza kwe-thermal yokwenziwa kwento kuphuculwe. Le yimvelaphi yegama "ibhulorho eyaphula ialuminium (ingxubevange)".